Ọpụpụ Ndị Shoprite Na Naịjiria; A na m anwụ anwụ Ezutela A na m anwụnyụ Anya | odumblog
Odum Blog1 month ago5 comments
posted on Aug. 03, 2020 at 11:22 am
Ozi agbasaala na ndị ụlọọrụ ma bụrụkwa ụlọ azụmahịa Shoprite ekwpụtala mmasị ha ịkwakọ ngwongwo ha si Naịjiria pụọ. Ihe a bụ ajọ oge nyere ndị Naịjirịa niile ọkacha ndị Shoprite nyere ohere isonye arụrụ ha ọrụ. A ka na-ekwu na ọrụ adịghị na Naịjiria, otu n’ụlọọrụ na-enye ndị mmadụ ọrụ na-ekwu okwu mmechi.
Ndị ụlọahịa Shoprite mere ka a mata na kemgbe ha jiri tinye isi na Naịjiria n’afọ 2005, ha enweela ụlọahịa 28 na Naịjira, ma wekwa ihe karịrị mmadụ 2000 n’ọrụ nke ihe karịrị mmadụ 1800 bụ naanị ndị Naịjiria.
Ndị NECA mere ka a mata na mbido afọ 2020, na ọnọdụ enweghi ọrụ na Naịjiria dị 33.5%.
Ndị mmadụ egosila obi mgbawa nakwazi mwute n’ajọ ọnọdụ a ụmụafọ Naịjiria na-ahụta onwe a n’ime ya n’ihi oke mpụ na aghụghọ ndị nọ n’ ọchịchị. Ha akpọkuola gọọmentị etiti ka tinye anya na mmiri were mara ka e si akwọ Naịjiria ukwu wara.
Tags:Effects of Shoprite closureIgbo NewsnECAOdumblogOdumblog newssHOPRITE closure
Odum Blog August 3, 2020
Shoprite akwakọọ Ngwongwo ha na Naịjiria
Odum Blog6 hours ago